Sliding Camera နဲ့ မျက်နှာပြင်အောက်လက်ဗွေရာ ကိရိယာပါတဲ့ Honor Magic2– Myanmar Mobile App
Posted on October 31, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
Honor က စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Magic2ကို တရုတ်မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Screen-to-body Ratio အမြင့်မားဆုံး ဖုန်းများထဲမှ တစ်လုံး ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘောင်ပျောက် ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပြီး အလွန် လှပပါတယ်။ သူ့မှာ ၆.၃၉ လက်မ AMOLED Display ထည့်သွင်းထားပြီး မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာ ကိရိယာ ပါပါတယ်။ Full HD+ Resolution ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင် အချိုးမှာ 19:9 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဘောင်ပျောက်ဖုန်း ဖန်တီးဖို့ အတွက် အရှေ့ ကင်မရာများကို Slider Design ဖန်တီးထားပါတယ်။ Slider မှာ 16MP Camera နဲ့ အတူ 2MP Depth Sensor ၂ လုံးကို အားဖြည့်ထားပါတယ်။ 3D Face Unlock အတွက် IR Face Scanner တစ်လုံး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 16+24+16MP Camera သုံးလုံး ထည့်သွင်းထားပြီး 24MP ဟာ အဖြူ၊ အမည်းနဲ့ 16MP ဟာ မြင်ကွင်းကျယ် ကင်မရာများ ဖြစ်ပါတယ်။ AI က ထောက်ကူထားတဲ့ အတွက် Selfie များ၊ Bokeh Effects များ၊ Beautification Feature များက အလွန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
သူ့မှာ နောက်ဆုံးထုတ် HiSilicon Kirin 980 Chip ထည့်သွင်းထားပြီး 7nm ဖြင့် တည်ဆောက်ထားတာပါ။ မော်ဒယ် သုံးခု ထုတ်လုပ်ထားပြီး 6/128 GB ကို CNY3,799, 8/128 GB ကို CNY4,299, 8/256 GB ကို CNY4,799 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တရုတ်မှာ ရောင်းချပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး အခြား နိုင်ငံများမှာ ရောင်းချမယ့် သတင်းကို မသိရသေးပါဘူး။
Sliding Camera နဲ့ မကျြနှာပွငျအောကျလကျဗှရော ကိရိယာပါတဲ့ Honor Magic 2
Honor က စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ Magic2ကို တရုတျမှာ ကွညောလိုကျပါတယျ။ Screen-to-body Ratio အမွငျ့မားဆုံး ဖုနျးမြားထဲမှ တဈလုံး ဖွဈလာပါတယျ။ ဘေောငျပြောကျ ဒီဇိုငျး ဖွဈပွီး အလှနျ လှပပါတယျ။ သူ့မှာ ၆.၃၉ လကျမ AMOLED Display ထညျ့သှငျးထားပွီး မကျြနှာပွငျအောကျ လကျဗှရော ကိရိယာ ပါပါတယျ။ Full HD+ Resolution ဖွဈပွီး မကျြနှာပွငျ အခြိုးမှာ 19:9 ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို ဘောငျပြောကျဖုနျး ဖနျတီးဖို့ အတှကျ အရှေ့ ကငျမရာမြားကို Slider Design ဖနျတီးထားပါတယျ။ Slider မှာ 16MP Camera နဲ့ အတူ 2MP Depth Sensor ၂ လုံးကို အားဖွညျ့ထားပါတယျ။ 3D Face Unlock အတှကျ IR Face Scanner တဈလုံး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ 16+24+16MP Camera သုံးလုံး ထညျ့သှငျးထားပွီး 24MP ဟာ အဖွူ၊ အမညျးနဲ့ 16MP ဟာ မွငျကှငျးကယျြ ကငျမရာမြား ဖွဈပါတယျ။ AI က ထောကျကူထားတဲ့ အတှကျ Selfie မြား၊ Bokeh Effects မြား၊ Beautification Feature မြားက အလှနျ ကောငျးမှနျပါတယျ။
သူ့မှာ နောကျဆုံးထုတျ HiSilicon Kirin 980 Chip ထညျ့သှငျးထားပွီး 7nm ဖွငျ့ တညျဆောကျထားတာပါ။ မျောဒယျ သုံးခု ထုတျလုပျထားပွီး 6/128 GB ကို CNY3,799, 8/128 GB ကို CNY4,299, 8/256 GB ကို CNY4,799 သတျမှတျထားပါတယျ။ တရုတျမှာ ရောငျးခပြေးလိုကျပွီ ဖွဈပွီး အခွား နိုငျငံမြားမှာ ရောငျးခမြယျ့ သတငျးကို မသိရသေးပါဘူး။
#1. Cooke Cooke ဟာ ဟက်ကင်း ဘာသာရပ်ကို သူမဘာသာ လေ့လာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ပလေဘွိုင်းမဂ္ဂဇင်း မော်ဒယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ဟာ ဟက်ကာ လို့ ခံယူထားပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေပေါ်မှာ တရားမ၀င်ဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ၊ တနည်းအားဖြင့် ပါပါရာဇီတွေက ရိုက်ယူထားခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ Private ဓါတ်ပုံတွေကို ကို အများပြည်သူတွေကို ချပြပြီး စီးပွားရှာနေတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ ယိုပေါက် နဲ့ Backdoor တွေကတဆင့် ဓါတ်ပုံတွေကို ပြန်လည်ရယူပြီး အဲဒီ စာမျက်နှာတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက် သာ ဖြစ်ပါတယ်။ . ဒါကြောင့် သူ့ကို ဟက်ကာ လောက မှာ Hacker Fairy […]
Apple က အိုင်ဖုန်း အသစ်များအတွက် Smart Battery Case ကို ရောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ Apple Store Website ကနေ ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ဖုန်းမော်ဒယ် အားလုံး အတွက် ၁၂၉ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အနက်နဲ့ အဖြူရောင်များ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Apple က ကေ့စ်အသစ်များကို နောက်ဆုံးထုတ် အိုင်ဖုန်းများမှာသာ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ ပြောတဲ့ အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထုတ် iPhone X မှာတော့ အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ Apple က ကေ့စ် အသစ်များမှာ Qi Wireless Charging ကို ထောက်ပံ့တယ်လို့ ပြောတဲ့ အတွက် ကေ့စ်တပ်ထားရင်တောင် ဖုန်းကို ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကေ့စ်မှာ သီးခြား Wireless […]
Posted on June 28, 2018 Author Ko Nyi
လက်ရှိမှာတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ စံနှုန်းအရ SD Card များမှာ အများဆုံး ပါဝင်တာက 2TB ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ SanDisk က ကမ္ဘာမှာ အရွယ်အစား အကြီးဆုံး 1 Terabyte SD Card ကို ပြသခဲ့ပေမယ့် သူ့ကို အခုထက်ထိ မရောင်းချသေးပါဘူး။ အဲဒီလောက် သိမ်းဆည်းနိုင်မယ့် ကဒ်များဟာ 4K Video နဲ့ VR Content များအတွက် အဆင်ပြေလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီထက် ပိုမို သိမ်းဆည်းနိုင်မယ့် ကဒ်များ ထွက်ပေါ်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SD Association က 128 Terabytes အထိ ၀င်ဆန့်တဲ့ SD Card […]